ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်အရာကိုအသီးအသီး၏ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ကိုရှောင်ရှားသင့်
အားဖြင့် Kim ကလှံ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 24 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
ပထမဦးစွာရက်စွဲများအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကြောက်စရာကောင်းရှိနိုင်ပါသည်, အထူးသဖြင့်ကကောင်းပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်အောင်မှကြွလာသောအခါ. သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအများဆုံးဖွယ်ရှိတစ်ထစ်ခြင်းမရှိဘဲဖြတ်သွားလိမ့်မည်နေစဉ်, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုထုတ်ယူသည့်အခါအချို့သောအရာရှိတယ်အသီးအသီးကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်.
Ever Late Show Up ကိုမထားပါနဲ့
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်အချိန်မှန်ဖြစ်ခြင်းပကတိမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ up to date ဖြစ်နေဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်နှောင်းပိုင်းသင့်ရက်စွဲမှားစွဲမှတ်ပေးတော်မူမည်. သူသည်သင့်ကိုအစဉ်အမြဲ tardy သောရိုက်ချက်ရစေခြင်းငှါ, သင်အချိန်ပေါ်တက်ပြသနိုင်ဖို့သူမနှင့် ပတ်သက်. လုံလောက်ဂရုမစိုက်ပါဘူးကြောင်း, သို့မဟုတ်, သင်ရောက်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်, သူမကထရပ်ထားပြီးစဉ်းစားစေခြင်းငှါ. ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်, ထိုသို့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေ၌သူမ၏ထားရန်ချည်နှောင်လျက်ရှိ၏နှင့်သင့်ရက်စွဲ၏အစအဦးမှတစ်ဦးအချဉ် note ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ. မကြောင့်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပအင်အားစုများ၏နှောင်းပိုင်းတက်ပြသနိုင်ဖို့ရှိပါက, သင်သူမ၏သိသို့မဟုတ်ပါစေသင့်ရဲ့ရက်စွဲကိုပဌနာသေချာအောင်, သင်၏တစ်ဦးဆဲလ်ဖုန်းရှိသည်မပါဘူးဆိုရင်, သူတို့သူမ၏သိစေနိုင်အောင်စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်အစည်းအဝေးရာအရပ်ကိုကိုပဌနာ.
Disheveled Up ကိုပြရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောမထားပါနဲ့
ရက်စွဲတက် freshen နှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကြည့်နိုင်ဖို့ခင်အချိန်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုံလောက်သောအချိန်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်. သင် shaggy ရှာဖွေနေတဲ့ပထမဦးဆုံး up to date ဖြစ်နေပြတယ်ဆိုရင်, unkept, နှင့် funky အကြိုင်, သင့်ရဲ့နေ့စွဲသင်နှင့် ပတ်သက်. မှားယွင်းသောထင်မြင်ရကြမည်. သင့်ရဲ့နေ့စွဲသင်သည်ဤလမ်းရှိသမျှကိုအချိန်ကြည့်ရှုစဉ်းစားနိုင်ပြီးချက်ချင်းပိတ်ထားခံရ. ရေချိုးခန်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်များများပေးပါ, ရိတ်, နှင့်သင်၏အဝတ်ကိုသံ. ဒါကြောင့်အပိုနာရီဝက်သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့ရက်စွဲကိုရှာနေခဲ့သည့်ဆွဲဆောင်မှုအစွန်းပေးရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ဖြစ်နိုင်, မှတ်မိ, ရက်စွဲတစ်ခုတက်သည်သန့်ရှင်းစင်ဖို့အချိန်ကိုမကိုးစားဘဲ၎င်း၏ရလဒ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်. ကောင်းစွာဆောင်ဖို့ကိုအသုံးပြုပြီးဝတ်ဆင်လူတဦးသည် stinky slob ကျော်အခါတိုင်းထွက်အနိုင်ရလိမ့်.
သူမ၏၏တပ်ဦးတွင်အခြားအမျိုးသမီးများထဲကကို Check လုပ်မထားပါနဲ့
သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူနေ့စွဲအပေါ်သွားသည့်အခါ, သင်ရက်စွဲ၏ကာလအတွက်သူမ၏မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြ. ဒီအတွက်ကြောင့်, ဒါကြောင့်သင်ကနေ့စွဲနေစဉ်အတွင်အခြားအမျိုးသမီးများထွက်စစ်ဆေးနေခံရဖို့လိုင်းထဲကထွက်လုံးဝဖြစ်ပါသည်. ဒီရိုင်းစိုင်းနှင့်လက်မခံနိုင်ဖြစ်. အဆက်မပြတ်အားဖြင့်လမ်းလျှောက်သွားအများဆုံးဖွယ်ရှိသင့်ရက်စွဲလုံခြုံမှုကင်းမဲ့စေလိမ့်မည်ကျိန်းသေသူမ၏သင်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားသောရိုက်ချက်ကိုမပေးပါဘူးအခြားသောမိန်းမအားဖြင့်အာရုံထွေပြားခံရ. သင်သည်အမြဲတစေလာမည့်စားပွဲ၌ပူဆံပင်ရွှေရောင်မှာသူမ၏ပခုံးကျော်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, အရာနှစ်ခုထဲကတစ်ခုလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာရန်အာမခံချက်ရှိပါသည်: 1) သင့်ရဲ့ရက်စွဲကိုသူကိုယ်တိုင် ပတ်သက်. အလွန်ဆိုးရွားခံစားစေမည်, သူမဆွဲဆောင်မှုမရှိဒါမှမဟုတ်မလိုအပ်တဲ့ဖြစ်ပါသည်စဉ်းစား, သို့မဟုတ် 2) သင့်ရဲ့နေ့စွဲသင်တို့နှင့်အတူအအလွန်အမင်းအမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်, မကောင်းတဲ့ drive ကိုအိမ်နှင့်တစ်စက္ကန့်ရက်စွဲတစ်ခုမှိန်ဖျော့လွန်းသောအခွင့်အလမ်းများအတွက်အောင်.
အ, Conversation ဆောင်လွှမ်းမိုးမထားပါနဲ့
အခါပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်, သင်နှင့် ပတ်သက်. ပုံပြင်များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရယူနှင့်သင်၏မိန်းကလေးအထင်ကြီးရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရနိုင်တယ်. အဲဒါအရမ်းကောင်းတယ်, ဒါပေမယ့်တန်ဆာမလိုက်မသွားဘူး. စကားလက်ဆုံလူနှစ်ဦးအကြားဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ, အခြားမှာပြောနေမလူတစ်ဦး. သင့်ရဲ့နေ့စွဲနှင့်အတူအချို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များနှင့်အကြံအစည်ဝေမျှဖို့အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးဒါဟာင်, သင်မူကား, အညီအမျှစကားပြောခန်းကိုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သူမ၏လုံလောက်သောအချိန်ပေးနေပါသည်သေချာအောင်. သူမကိုယ်သူအကြောင်းကိုသူမ၏မေးခွန်းများကိုမေးပါ, ဤသူသည်သင်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်သူမနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားကြနှင့်သင်သူမ၏အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်ကြောင်းသူမ၏ပြပါလိမ့်မယ်.
ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့ရှိသမျှသည်မကောင်းတဲ့လက်ထက်ခဲ့ကြရသည်, ဒါပေမယ့်နေ့စွဲ (အထူးသဖြင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ) သင့်ရဲ့မကျေလည်မှုတွေအားလုံးကိုလေထုရာအရပ်ကိုမဖြစ်. အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ, သင့်ရဲ့နေ့စွဲကောင်းတစ်ဦးရှိသည်မျှော်လင့်ဖြစ်ပါတယ်, ပျော်စရာအချိန်ကြသောအခါသူမကသင်တို့နှင့်အတူအတက်နှင့်တွေ့ဆုံ. သူမက 'Gosh အသွားအလာနှင့်အတူကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်ဆိုပါထိုကဲ့သို့သောpainÖIဒီtownîမုန်းခဲ့သူမချက်ချင်းကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်. အစုံလိုက်တစ်ဦးကဖိစီးမှုများအတွက်လေသံသည်မြည်တမ်းခြင်းရှိ, မပျော်ရက်စွဲ. သင်ကစာရင်းယူခြင်းတနေ့ခဲ့ရင်တောင်, အဲဒီအကြောင်း whining ညဉ့်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့. ကိုယ့်ကိုသင်၌စိတ်ဝင်စားကြမိန်းမနှင့်အချိန်ဖြုန်းခံရဖို့ပျော်ရွှင်စေ. အပြုံးများကူးစက်တတ်ပေမယ်ဒါကြောင့်မျက်မှောင်ကြုတ်များမှာ. အကယ်. သင်သိဖြစ်စေမ, သင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေသင့်သည့်ရက်စွဲနှင့်သူမဘယ်လိုသင်နှင့် ပတ်သက်. ခံစားရထိခိုက်နိုင်. သင့်ရဲ့နေ့စွဲရယ်စရာနှင့်အကောင်းမြင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုအောက်မေ့သတိရချင်တယ်, မ downer.
လွန်းကိုယ်ရောစိတ်ပါမှထုတ်ပြန်သော Be မပြုပါနဲ့
အချက်ပြမှုများသို့သင့်ရဲ့ရက်စွဲကိုဖတ်ရှုဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ထိုသို့နမ်းခြင်းအတွက်မသွားခင်ပေး (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို). အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်နောက်အဆင့်မှသင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာယူအဆင်သင့်ဖြစ်မယ့်အကောင်းရက်စွဲခဲ့ကြလို့မထင်မိပါဘူး. သင်သည်သင်၏ရက်စွဲနမ်းစိတ်ဝင်စားလျှင်, လက်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့်အတူပယ်စတင်, တစ်ဦးပွေ့ဖက်, နှင့်တဖြည်းဖြည်းနမ်းဖို့ကိုတည်ဆောက်ခြင်း. သင့်ရဲ့နေ့စွဲရဲ့ဆန္ဒကိုအစဉ်အမြဲရိုသေလေးစား. သူမမဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုမျှမကပြောပါတယ်ဆိုရင်, မျက်နှာတန်ဖိုးမှာသူမ၏တုန့်ပြန်ယူနဲ့ off ကို back. ကရင်းနှီးဖို့ကြွလာသောအခါလွန်းရန်လိုသူသည်လူတဦးသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို turn off နိုင်ပြီးအမှန်တကယ်ထိုမိန်းမသည်ကြောက်လန့်ခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စေနိုင်.
သင်မရည်ရွယ်ကြပါဘူး အကယ်. သင်ဟာသူမရဲ့ Call လိမ့်မယ်သူမ၏ပြောပြပါမထားပါနဲ့
သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ကြပါဘူးသောအခါငါyouîခေါ်လိုက်မယ် '' အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုပြောပြနေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်. ထိုမိန်းမသည်သင်နှင့်အတူဒုတိယရက်စွဲအတွက်စိတ်ဝင်စားခဲ့မယ်ဆိုရင်, သူမသာသင်ကဒုတိယရက်စွဲတောင်းဆိုမဆိုရည်ရွယ်ချက်ကိုမရှိခဲ့ဘူးကြောင်းလေ့လာသင်ယူဖို့သင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ပတ်ပတ်လည်စောင့်လျှင်သူမ၏စိတ်ပျက်စရာသာချီးမြှောက်လိမ့်မည်. သင်သူမ၏ကိုပဌနာမခံလိုကြဘူးဆိုရင်, ကိုယ့်ကောင်းနှုတ်ဆက်တယ် '' ဒါဟာကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးသင်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့ပါတယ် '' ဟုရက်စွဲအဆုံးသတ်, ထိုeveningî၏လှပသောအရာကြွင်းလေရှိသည်. သင်တို့အပေါ်မှာသို့မဟုတ်သူမ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုတက်လာပြီသူမ၏ဦးဆောင်ကြသည်မဟုတ်ဒီနည်းလမ်း. တစ်ပြောင်းပြန်မှတ်စုတွင်တွင်, သင်ကဒုတိယရက်စွဲစီစဉ်ဖို့လိုပါလျှင်, သင်သူမ၏သိစေသေချာအောင်.
ပထမဦးဆုံးရက်စွဲများအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းအာရုံကြော-wracking နိုင်ပါတယ်, သို့သော်အချို့ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်ချက်များသည်အောက်ပါရက်စွဲအပေါ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးရက်စွဲသေချာစေရန်ကူညီပေးပါမည်နေစဉ်. သင်ရင်းနှီးဖော်ရွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အချိန်မှန်, ရိုသေလေးစားမှု, နှင့်ညော, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်နှင့်သင့်သည့်ရက်စွဲ, ကြီးစွာသောအချိန်ကိုရလိ​​မ့်မည်ဟုနှင့်, ဆွဲဆောင်မှုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လျှင်, သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲလှပသောဆက်ဆံရေးက start ဖြစ်နိုင်.
Libro အတွက်အိပ်မက်မက်ခြင်း: ဘယ်လိုနည်းနဲ့တစ်ဦးကောင်းခွေးများအတွက်ယဉ်မင်းဆိုးအချင်းမိန်းမ